Muxuu Rooble kala hadlay Guddiyada Doorashooyinka? | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay heerarka kala duwan ee Guddiyada Doorashooyinka Dadban.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa kulan ka dhacay aaladda fogaan aragga ee ZOOM, la qaatay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad-goboleed iyo Xallinta Khilaafaadka, kuwaas uu kala hadlay cabashooyinka is-daba socda ee arimaha doorashooyinka dalka.
“RW Maxamed Xuseen Rooble oo habka fogaan aragga shir kula yeeshay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad-goboleed iyo Xallinta Khilaafaadka, ayaa faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo wadashaqeynta dhexdooda ah, si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xukuumadda.
Wuxuu Guddiyada ku war-galiyay in cabshooyinku bateen, isla-markaana, ay u muuqdaan in ay ku milmeen siyaasadda horjoogayaasha maamullada, isagoo ugu baaqay in ay ilaaliyaan kalsoonida la siiyay.
Wuxuu ku amray darafyada guddiyada in ay meesha ka saaraan khilaadka soo if-baxay ee dhexdooda ah, wuxuuna ku booriyay in ay waajibaadka hirgilinta doorashada saaran tahay iyaga, loona baahan yahay in ay madax banaannaadaan.
Guddiga Heer Dowlad-goboleed, wuxuu ku amray in aysan qaban karin doorashada kursi aysan shuruudihiisa hubin Guddiyada Heer Federaal, wuxuuna wax laga xishoodo ku tilmaamay habkii ay ku dhacday doorashadii HOP103, oo shalay ka dhacday Baydhabo.
“Madaxda Dowlad goboleedyada wax door ah kuma laha soo xulidda ergada, dhagihiinna fura, maanta arrintaas meel xasaasi ah ayay mareysaa, waa digniintii ugu danbeysay, guddigii aan arko isagoo ka dhinac hadlaya kursi uu guddi kale war ka soo saaray, waraaqihiisa hore ha u soo qaato, digreeto Ra’iisul Wasaare, ayaad ku soo baxden, shacabka Soomaaliyeed uma dulqaadan karaan musuq iyo hufnaan la’aan”. Ayuu yiri Rooble.
Midowga Musharaxiinta ayaa shalay Ra’iisul Wasaaraha la waaagay walaac ku aaddan, daahfurnaan la’aanta ka jirta doorashooyinka dalka, isla-markaana ku war-galiyay in aysan raali uga noqon karin habka wax u socdaan.
Rooble, wuxuu shalay ballanqaaday inuu kulan deg deg ah la qaadan doono, Guddiyada Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed iyo heer Federaal, ka hor inta uusan kulan isugu yeerin Golaha Wadatashiga Qaranka.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay habka ay ku billowdeen doorashooyinka kuraasta Golaha shacabka, kuwaas oo si daran loogu boobay Baydhabo, Muqdisho iyo Dhuusamareeb.
Tan iyo markii uu Rooble socdaal ku tagay dalka Qatar, dad badan ayaa rumeysan inuu dib ugu laabtay la shaqeyntii daneysiga ku dhisneyd ee Farmaajo, waxaana laga sii aamin baxay, markii uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ka dhigay Cabdi Saciid oo Farmaajo uu keensadey.
Rooble, malaha damac siyaasadeed oo sanadkaan ku wajahan xilka Madaxweynaha, sidaas oo ay tahay, wuxuu ku fashilmay inuu si daahfuran u maamulo doorashooyinka, wuxuuna indhaha ka daawanayaa boobka Farmaajo.